Dhageyso:Sheekh Cali Dheere Oo Shir Jaraa'id Ku Faah Faahiyay Weerarkii Xarunta Baarlamaanka iyo Arrimo Kale.
Saturday July 05, 2014 - 19:42:56 in Wararka by Super Admin
Afhayeenka xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo shir Jaraa'id qabtay ayaa faah faahin buuxda ka bixiyay Howlgallo maanta ka dhacay Muqdisho.
Sheikh Cali Dheere Afhayeenka Al Shabaab
Sheekh Cali dheere wuxuu sheegay in weerar qorshaysan ay ku qaadeen xeyndaabka xarunta baarlamaanka dowladda Federaalka,wuxuuna xaqiijiyay in weerarkii maanta ay ku dileen 30 Askari oo DF-ka katirsan iyo 2 askari Yugaandheys ah.
Xarakada Al Shabaab ayaa baaq udiray ciidanka Dowladda Federaalka ee ilaalada ka haya xarumaha muhiimka ah ee DF-ka "Waxaa tihiin wiilal soomaaliyeed war isaga taga dulliga aad ujirtaa in aan idin dilno waxaan ka jecelnahay in aad towbad keentaan oo aad islaamnimo ku dhimataan"ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Mujaahidiinta Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen Ol Ole ka dhan ah ciidamada Ilaalada waddooyinka DF-ka ee Taraafikada looga yaqaan "Kuwa Taraafikada waxaan leenahay inbadan waan idinka meer-meernay balse waxaad naqateen cumalo waddooyinka taagan hadda kadib bartilmaameed ayaad utihiin mujaahidiinta haddii aad ka joogsan weysaan falalka aad ku jirtaan"ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sheekh Cali dheere.
Halkan ka degso Shirka Jaraa'id ee Sheekh Cali dheere MP3